Netsuite နှင့် Microsoft Dynamics CRM အတွက် Delivra Cazoomi ပေါင်းစည်းခြင်း
CRM အတွက် Delivra Enlists Cazoomi AppSync®
အင်္ဂါနေ့, မေလ 1, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့၏ အီးမေးလ်စျေးကွက် စပွန်ဆာ Delivra သည်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်ပေါင်းစည်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် Netsuite နှင့် Microsoft က Dynamics ကို CRM အသုံးပြုခြင်းပလက်ဖောင်း Cazoomi.
အကယ်၍ သင် Cazoomi SyncApps®အကြောင်းမကြားရပါက၎င်းသည်ဘဏ္,ာရေး၊ အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပေးသည့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် cloud application ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ကဝန်ဆောင်မှုပေး နှင့် / သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များအတွက် Cazoomi လျှောက်လွှာသည်လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထက်များစွာစျေးသက်သာသည်။ တဖန်သင်တို့ကုမ္ပဏီများကသူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကို update ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ… Cazoomi ဖို့ရှိပါတယ်!
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယို မှလွဲ၍ Cazoomi သည်အလွန်ခိုင်မာသောသက်သေပြသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအချက်အလက်သည်ပလက်ဖောင်းများတစ်လျှောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စာရင်းပေးသွင်းသူမှရွေးချယ်ထားသည့်အခါသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ CRM သို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကုန်ကျနိုင်သည်သို့မဟုတ် CAN-SPAM ၏စည်းမျဉ်းများကိုပင်ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းသည်သင်၏အဆက်အသွယ်ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်အစဉ်အမြဲရှိနေစေရန်အရေးကြီးသည်။
Tags: Appynccazoomiမြစ်ကြီးနားMicrosoft CRMနက်ဖြန်ထပ်တူပြုခြင်း
Douglas Karr Tuesday, May 1, 2012 Sunday, September 8, 2013
Visual Social Network များပေါ်ပေါက်လာခြင်း
မေလ 24, 2012 မှာ 12: 25 AM
ဒေါက်ဂလပ်၊ “ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအပြင် Cazoomi ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့၊ သက်သေပြနိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်” ဟူသောမှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်အထူးနှစ်သက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဗီဒီယိုသည် Q1 ရှိ SyncApps အတွက်ပထမအဆင့်မောင်းနှင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှုန်း။
ဤရေးမှတ်ချက်ကိုနှစ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး @cazoomi - twitter အသင်းများထံမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ps: ပိုကောင်းသောဗီဒီယိုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ docs ဆိုက်တွင်ရှိသည်။ :) http://www.edocr.com/user/cazoomi
မေလ 24, 2012 မှာ 12: 49 AM
ဗီဒီယိုကြီးတစ်ခုနှင့်သင်မည်မျှဆိုင်းအင်လုပ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ! ark snarky ဖြစ်ခြင်း - မင်းရဲ့ platform နဲ့မင်းလုပ်နေတာတွေကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်။